जापान जाँदै हुनुहुन्छ ? पहिले यो पढ्नुहोस् « Lokpath
२०७७, २९ पुष बुधबार २२:३२
जापान जाँदै हुनुहुन्छ ? पहिले यो पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति : २०७७, २९ पुष बुधबार २२:३२
काठमाडौं- जापानले गैरआवासीय विदेशीहरूलाई जापान प्रवेश गर्न फेरि रोक लगाइएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारी थप फैलिँदै गएपछि सरकारले फेरी विदेशीहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री योशिहिडे सुगाले सबै देशका गैरआवासीय नागरिकलाई जापान प्रवेश गर्न नदिने बुधबार घोषणा गरे । जापानले कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिँदै गएपछि देशका धेरै क्षेत्रमा सङ्कटकाल लगायतका कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ ।